Halkee ayuu marayaa heshiiskii ay kooxda Inter Milan ku dooneysay N’Golo Kanté?? – Gool FM
(Milano) 26 Sebt 2020. Ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Chelsea ee N’Golo Kanté ayaa go’aamiyay heshiiska uu ku xiranayo maaliyada naadiga Inter Milan xilli ciyaareedkan.
Warbixinno dhowr ah ayaa lagu xaqiijiyay in tababaraha kooxda Inter Milan ee Antonio Conte uu ka dhiganayo N’Golo Kanté bartilmaameedkiisa koowaad ee suuqan xagaaga.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England N’Golo Kanté ayaa wuxuu doonayaa inuu u dhaqaaqo Inter, iyo inuu markale ka hoos shaqeeyo macalinkiisii hore ee Antonio Conte.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan inay haatan harsan tahay kaliya in Inter ay hesho 46 million pounds, si ay u xalliso heshiiska N’Golo Kanté, kahor inta uusan xirmid suuqan xagaaga 5-ta October ee soo socota.
Wargeyska “The Sun” ayaa sheegay in Inter Milan ay ku fikireyso inay kaga iibiso kooxda Tottenham daafaceeda Milan Škriniar 55 million pounds, waxaana sidoo kale suurtogal ah inay ka iibiso xiddigeeda khadka dhexe ee Marcelo Brozović kooxda Monaco.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in maamulka Inter Milan uusan damacsanayn inuu ka tago Christian Eriksen, inkasta oo laacibka reer Denmark uusan weli helin kalsoonida Antonio Conte.